Peculiarities nke cultivation nke duck (ngwakọ udara na ụtọ udara) - Udara - 2020
Nri ụtọ nke cherị na ìhè sourness nke cherị ke kiet ke otu nnukwu beri - dị otú ahụ a zọpụta, ma e wezụga na nrọ, bụ inveterate botanist. Ma na ọdịdị, ihe nile nwere ike ime, na ọbụna karị ma ọ bụrụ na a na-ewepụta ndị na-azụ anụ maka mmelite nke mmetọ pollution. N'ihi ya, e nyere ndị na-elekọta ubi ohere ịzụlite dyuk ma ọ bụ, dịka a na-akpọ ha, ọkpụite. Nnukwu osisi na-esi ísì ụtọ na-egbuke egbuke na ọdịdị na uto, na osisi - na arụpụtaghị. Otu esi arụ ọrụ ebube dị otú ahụ na saịtị ahụ, anyị ga-agwa ya n'isiokwu a.
Ịhọrọ saịtị maka pottery na-eto eto
Akuku iwu seedlings
Otu esi echekwa ngwakọ: nhazi nke ọbọgwụ
Ugboro ole na ogbugba mmiri
Na-egwu ala ma na-agbagharị gburugburu wheel
Ntu oyi na Nchedo
Bara uru Njirimara nke duck tomato
Duke: gini bu ihe ebube a
Nye ọtụtụ ndị na-ahụ mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi beri, ụlọ bụ ihe ijuanya si ụwa nke akụkọ ifo. Anyị ga-aghọta ihe ọ bụ na ihe ọzọ dị na tomato - cherị ma ọ bụ ụtọ cherị.
Ndị ọkà mmụta sayensị, Duke bụ ngwakọ abụọ. Ọzọkwa, pollination nke osisi ndị a mere site na nso nso na narị afọ nke 17.
Ntughari akwukwo a nwere ndi nwere nkuzi, ka oge na-aga, ha weputara uzo di iche iche a.
Ị ma? Okwu "Duke" na-ezo aka na ngwakọ nke osisi na-eji nanị Slavic ndị mmadụ, na na Europe na ọ dịghị mgbọrọgwụ. Aha a sitere na ndi di iche iche nwere ike "May Duke", nke putara "May Duke".
Na mpaghara post-Soviet, onye ọchịchị mbụ ahụ pụtara na 90s na crossbreeding Belle cherị na Winkler ọcha cherị. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala na a na-akọ ihe na mpaghara ndị dị n'ebe ugwu, ya mere, ha na-eguzogide ntu oyi. Ma o siri ike karịa ihe ọkụkụ na-adịghị mma, osisi ahụ na-enyekwa obere ihe ubi.
Ihe odide Western, bụ nke wetara anyị na ndagwurugwu anyị, mekwara ka ndị na-akọ ubi na-enwe nsogbu na àgwà ndị dị na thermophilic, na-akpata ọtụtụ nsogbu na oyi. N'ime osisi ole na ole dị iche iche, ihe ka ọtụtụ n'ime ha wee ghọọ ndị na-adịghị amị mkpụrụ, ụfọdụ na-enye mkpụrụ dị ala.
Taa, foto a agbanweela n'ụzọ dị ukwuu. Ndị na-azụ akwụkwọ were ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike iji mee ka ndị na-elekọta ubi na ndị na-eguzogide ọgwụ siri ike na ọrịa na oyi. Tụkwasị na nke ahụ, n'ikpeazụ jisiri ike nweta oke dị elu. Ebe ọ bụ na onye ọ bụla bụ ngwakọ cherị na cherị, e nwere àgwà nke ụdị abụọ ahụ, ọ bụ ezie na e nwere ntakịrị ihe ngosi.
N'elu anya, ọ bụ obere osisi nwere okpueze kọmpat dị mma, ogwe osisi symmetrical, oblong epody epupụta, na-acha ọcha ọcha na mkpụrụ osisi buru ibu na-acha uhie uhie.
Ụdị na njupụta nke epupụta, okpukpo nke tomato, ha uto, oyi hardiness omenala nso ka cherry, na nke mkpụrụ ahụ, ọdịnaya sugar - ka ụtọ udara. Ná nkezi, otu beri na-agbatị gburugburu 15-20 g. Osisi abanye n'ọtụtụ mkpụrụ osisi n'afọ nke atọ ma ọ bụ nke anọ, na-eweta 10 kilogram nke tomato kwa oge.
Anyị na-akwado ka ị mara onwe gị na ndepụta nke oge mbụ na ọkara ripening udara iche, yana odo na mbubreyo ripening udara iche maka ubi gị.
Otu ụdị chromosomes dị iche iche nke cherị na cherị siri nnọọ ike ọrụ nke ndị na-akụ azụ na botanist nyere maka ịzụlite varietal dịgasị iche iche. Ọ bụ ya mere oke nhọrọ n'ime nhọrọ ụlọ ahụ ruo ogologo oge dị nnọọ ụkọ. N'etiti atụmatụ ndị Europe na narị afọ gara aga, ụdị mmepụta nke French "Queen Hortensia", "Empress Eugenia" nọ na-achọ. Taa, ndị ikwu ha amagbuola ha:
"Saratovskaya nwa" (nke a na-esi na-eto eto-eto eto na nnukwu dessert tomato, nke a na-ezo n'ime oke okpueze ma enweghi ike inweta nnụnụ);
"Olulu nke magburu onwe ya" (ọ bụ ihe dị mma maka igbochi mmiri ozuzo, ụmụ nje na-emerụ ahụ na nnukwu mmeri, ọ na-amị mkpụrụ dị elu kwa afọ);
"Pivon" (kwesiri nlebara anya site na uto nke ihe ubi);
nkezi ntozu okè
"Hodosa" (bụ osisi siri ike, na-enye nnukwu mkpụrụ osisi tomato na-atọ ụtọ;
"Spartan" (njirimara nke ụdị ọbọgwụ a na-eguzogide ntu oyi dị elu, ya mere a na-atụ aro ya maka mpaghara ugwu);
"Prenatal" (n'èzí nke a bụ osisi toro ogologo nke nwere mkpụrụ osisi buru ibu);
"Nọọsụ" (ụdị dị iche iche kachasị mma).
"Theanna" (mkpụrụ nke ụdị dịgasị iche iche a na-akpọ ọkọlọtọ cherry).
"Ivanovna" (bu onye ndu na di iche iche di iche iche di iche iche nke otu a ma bu osisi di ala nke nwere nnukwu uhie);
"N'abalị" (uru nke anụ ahụ na-adị na mkpụrụ ndụ ihe nketa maka ịbịakwute ndị na-ahụ maka moniliosis na kokomikoza);
"Magburu onwe Venyaminova" (atụmatụ nke dịgasị iche iche - na ok fleshy tomato).
Ọ dị mkpa! Ịzụta seedlings nke ite, kpachara anya. Mgbe ụfọdụ, a na-ere ha n'egosighi ihe dịgasị iche iche n'okpuru ederede aha "All" ma ọ bụ "cherry-cherry". Ihe ize ndụ nke ndị dị otú ahụ na-enweghị ike ịghọta ya, dịka a na-ajụkarị ụdị ihe eji emepụta mkpụrụ na-emepụta ihe na-adịghị mma na nke oyi na-eme nke mkpụrụ ndụ nne..
Nye ezigbo udara kelere gị na oke owuwe ihe ubi, ọ ghaghị ịchọta ebe kwesịrị ekwesị. Ma ọ bụghị ya, saịtị gị ga-abụ osisi agba. Maka mmepe zuru oke penumbra dị mkpa penumbra, nchebe site na ifufe oyi na drafts, yana ọgaranya na ala nri na-emeghachi omume acid na pH 7.
Ugbo na ala di ala, ebe otutu mmiri na achikota na onodu oyi na oyi na oyi, agagh adi.
Ọ dị mkpa! Maka mkpụrụ osisi dị ukwuu, a ghaghị ịkụ osisi ndị dị n'akụkụ cherị, ebe ọ bụ na ha onwe ha adịghị emetọ ihe ma ghara ịhụ eriri cherị.
Zuru okè a ga-enwe nkata na ìhè na-egbuke egbuke na ájá ájá. Ọ bụrụ na enweghị ihe dị na ụlọ gị, ọ bara uru ilekọta tupu ịmepụta ọnọdụ maka ụka. A ghaghị itinye neutralze na ala 1.5 acho nke acidic, a ga-ejikwa ala ala dị arọ dochie anya na ebe ọdịda na ngwakọta nke akụkụ nke ala na-eme nri ma ájá.
Mana nke a abughi ihe ndi mmadu nile choro. Ha aghaghi itolite na nso nso nke cherị na cherị, n'ihi na ha enweghi ike imeru ihe ndi mmadu. Maka mkpụrụ osisi na nso osisi 2-4.
Ị ma? Na oge ochie, ndị nna nna anyị na-eji ákwà ejiji akwa nri, ma ha adịghị acha odo odo, ma akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Onye nduzi kachasị mma mgbe ọ na-akụ mkpụrụ osisi dị iche iche nke mkpụrụ osisi a bụ ịnọgide na-enwe anya dị mkpa n'etiti osisi na nkwadebe nke oghere ahụ. N'akụkụ ndị ọzọ, ịkụ na ịhapụ ụlọ adịghị iche na ndị ibe ya. Zuru okè oge oge Osisi bụ mmalite oge opupu ihe ubi, ma ụwa ga-ekpo ọkụ nke ọma. Iji malite, mee mkpọtụ na ebe a họọrọ n'ebe dị mita 1 na dayameta ruo 70 cm. Omenala ndị ọzọ ekwesịghị ịdị nso karịa mita 5. N'okpuru olulu mmiri ahụ na-asọpụta, n'elu - nkedo nke ngwakọta a kwadebere na nke ahịhịa na-agbanwe agbanwe na ala na-eme nri.
Nhọrọ ọzọ nwere ike ibu nri na ịnweta: 0,5 n'arọ nke superphosphate na 300 g nke potassium sulfate. Osisi miri emi adịghị atụ aro, n'ihi na e liri mgbọrọgwụ olu ga-eme ka ire ere na ọnwụ nke ngwakọ. Mgbe ị na-egwu ala na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ, echefula ka ịkwanye okporo osisi ahụ n'ụzọ zuru ezu iji jupụta ala n'okpuru ala, ma mee ka osisi dị na mmiri. Ọ ga - ewe ihe dị ka bọket abụọ.
Ị ma? Ihe dị ka kilogram 40 nke pollen na-anakọta site na otu hectare cherry na cherry orchards.
Na nlekọta nke ọbọgwụ chọrọ nlebara anya karịa osisi ndị ọzọ na-akụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ dịghị mkpa ka ha na-eri nri. Na ihe niile n'ihi na ihe oriri na-eme ka ọ dịkwuo ọkụ, ma, ọ dị mwute, site na oge oyi, ọ dịghị enwe oge iji mee ka ọ dịkwuo ike ma bụrụ nke kachasị njọ - ka ọ nwụọ.
Ịgbara, okpueze okpueze na ọgwụgwọ osisi na-adị mkpa maka ịkọ osisi. Ma banyere ihe a niile.
Dịka mkpụrụ osisi niile, ndị a anaghị adị mkpa ugboro ogbugba mmiri. Ngafe mmiri na-eduga na cracks ke akpati na skeletal alaka, nakwa provokes rotting rhizomes. Iji ghara ịmị osisi ahụ n'ule ndị ahụ, a ghaghị ịme ya mmiri naanị n'oge oké ọkọchị.
A ghaghị ịmịka ndị na-eto eto rue mgbe ọ dị afọ ise, n'ihi na enweghị mmiri ga-eme ka mgbọrọgwụ kwụsị. Ekwela ka ikpocha ahihia siri ike na ala pristvolnyh. Ugboro ole ogbugba mmiri na-adabere n'ọnọdụ ihu igwe. Jiri mmiri abụghị mmiri oyi, oge ọ bụla iji chebe ya.
Ọ dị mkpa! Ihe kachasị mma maka ọbọgwụ bụ ndị na-esonụ ụdị cherị dị ụtọ: "Annushka", "Donchanka", "Nwanyị Nwanyị", "Homestead".
Mbido mbụ udara-cherị na-eme ozugbo mgbe kere seedling. N'elu ọkwa 60 cm site na ala, o gbuturu elu nke ogwe osisi na skeletal alaka. N'afọ nke abụọ, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke akụkụ osisi ahụ dị mkpụmkpụ. Ndị na-akọ ubi hụrụ na tupu mmalite nke ịmị mkpụrụ osisi, osisi na-ejupụta n'uba kpụ ọkụ n'ọnụ, ya na ọdịdị nke akuku mbụ, alaka na-akwụsị ịmalite.
Maka osisi ochie, mmiri na-emegharị ihe ọ bụla ọzọ, nke ga-ewepụ ihe na-epulite n'ogologo okpueze ruo n'ogo osisi anọ. A na-emeghachi usoro a kwa afọ ise ruo isii.
A gaghị ekwe ka okpukpu okpueze kwere, ebe ọ bụ na nnukwu na àgwà nke tomato na-adabere n'ihe a. Mgbe ị na-eme ntutu isi, ṅaa ntị n'akụkụ nke nkewa nke Ome site na akpati - nke ka ọ bụ, ihe na-erughị oke.
Ụfọdụ ndị na-akọ ubi na-akụ mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nnukwu ebe iji mee ka ala mmiri na-egbuke egbuke. N'ihe gbasara ndị isi, nhọrọ a bụ ihe a nabatara nke ọma, ma akụkụ nke pristvolny kwesịrị ịnọgide na-adị n'okpuru ụgbụ ojii. Ha na-emekarị ka ha wepụ ata ah u ma wepu ala. Ma ọ ka mma ịme ya mgbe ị gụsịrị mmiri.
Igwu ala n'elu ala n'enweghị ihe mgbochi na - eme ka ikuku gbanye mgbọrọgwụ, nke dị oké mkpa maka osisi mkpụrụ osisi. Iji mee ka mmiri microclimate a kapịrị ọnụ, a na-agwa mkpụrụ dị gburugburu ịkpụ osisi ka ọ na-ata ahịhịa. Nke a na - enyere osisi aka ichebe mgbọrọgwụ n'oge oyi ma jide mmiri. Enweghị ụzọ Egbasala mulch na ala akọrọ.
Ị ma? Mkpụrụ osisi duck nwere ike iru 2 cm na olu.
Ohia nwere ihe ndi na-eguzogide ntu oyi, ya mere, oru nnochi iche iche maka igba oyi na ugbua osisi anaghị achọ. Iche dị iche iche na mmiri na-adịghị ike nke na-adịghị ike na-achọ nlebara anya, karịsịa na mpaghara ugwu.
Ụzọ kachasịsịsị mkpa bụ iji kpuchie mgbọrọgwụ nke akpati na snow, na akụkụ nke n'elu-ala - na nnukwu polyethylene. Ụmụ osisi na-eto eto dị n'okpuru afọ ise na-achọkwa ụdị aka ahụ. Ụfọdụ ndị na-elekọta ubi na-ekerịta ahụmahụ nke ịmịnye ogwe ya na spruce ma ọ bụ burlap. Usoro a na - enye gị ohere imezi oge nsogbu abụọ: chebe ogbugbo ka ndi na-eri anu ghara iri ya ma chebe oghere nke oghere site na ntu oyi. Ị nwere ike imenye ndị mmadụ agụụ na-agụ agụụ site na enyemaka nke mpempe akwụkwọ.
Chọpụta otu ị ga - esi zọpụta beri bido ị na - eri na ya n'oge oyi.
A na-enweta uru nke tomato. N'ụlọ nnyocha, ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na mkpụrụ osisi ahụ na-atọ ụtọ abụghị naanị na-atọ ụtọ, ma na-enwekwa ihe mgbochi bacteria, meziwanye agụụ, ma nwee mmetụta bara uru n'ahụ ahụ mmadụ na ọrịa nke ọnyá afọ, ọrịa nhụjuanya, ọrịa nke akpịrị na bronchi, gout, arthritis, anaemia.
Ndị ọkà mmụta ihe banyere ọrịa na-ekwenyesi ike na ihe ọṅụṅụ nke mkpụrụ osisi na-egbochi mmepe nke etuto ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, tomato ndị dị ebube bụ nri calorie obere. 100 g mkpụrụ bụ 50 Kcal, 0,5 g abụba, 0,8 g protein na 0 g nke carbohydrates.